Saddex dumar ah oo baddalaya wajiga siyaasadda Mareykanka - BBC News Somali
Rashida Tlaib, Ilhan Omar iyo Alexandria Ocasio-Cortez waxaa xilalka loo dhaariyay 3 January 2019
Ilhaan Cumar: "Gabdhaha waxay dhihi doonaan xijaabkeyga wax haka sheegina"
Inkastoo ay saaxada siyaasadda heerkeeda sare ku cusub yihiin, hadda waxay xilli horeba awood u yeesheen iney baddalaan qaab dhismeedkii siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka.
1- Alexandria Ocasio-Cortez: Gabadhanoo ay da'deedu tahay 29 sano, waxay noqotay qofkii ugu da'da yaraa ee abid ku biira aqalka Koongareeska Mareykanka, halkaasoo ay isugu tagaan siyaasiyiinta ugu waaweyn Mareykanka.
Alexandria Ocasio-Cortez waxay Koongareeska kula biirtay tiradii dumarka ahayd ee ugu badneyd abid
2- Ilhaan Cumar: Waa 38 jir, waxaana laga soo doortay gobolka ay Soomaalida badan daggan tahay ee Minnesota.
Ilhaan Cumar waxaa loo xushay iney ka mid noqoto guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Koongareeska
Gabadhan kasoo jeedda Falastiin waxay curad u tahay 14 carruur ah
Tlaib oo qareen ah waxay ka soo jeeddaa dalka Falastiin waxayna ayeeyadeed iyo qaraabadeeda kaleba ilaa hadda ku nool yihiin dhulka ay Israa'iil heysato ee Daanta Galbeed.
Ilhaan Cumar ayaa dhawaan warbaahinta ruxday ka dib markii ay si adag su'aalo u weydiisay danjiraha cusub ee uu madaxweynaha Mareykanka u magacaabay dalka Venezuela.